Maxay Al-shabaab U Weeraraan Huteelada? | Somaliland Post
Home News Maxay Al-shabaab U Weeraraan Huteelada?
Maxay Al-shabaab U Weeraraan Huteelada?
Muqdisho(SLpost) – Ururka Al-shabaab ayaa weerarro la beegsada qaar ka mid ah huteellada ku yaalla caasimadda Muqdisho, kuwaasi oo ay ku nool yihiin siyaasiyiin iyo dad bartilmaameed u ah ururkaasi.
“Waxaa fooda nagu soo hayay sanadka cusub, waxaana wada casheyneynay qaar ka mid ah asxaabteyda Muqdisho, kaddibna waxaa dhacay qarax xooggan.
Mid ka mid ah asxaabta iga caawisa dhanka ammaanka marka aan joogo Muqdisho, ayaa ii sheegay in qaraxa uu ka dhacay huteelka Jaziira. Qaar naga mid ah ayaa fuulay saqafka meeshii aan joognay, waxaana aragnay qiiq iyo holac ka baxaya derbiga huteelka oo gaadhi lagu qarxiyay.
Gawaadhida gurmadka degdega iyo kuwo ay ciidammada leeyihiin ayaa durbadiiba gaadhay huteel Jaziira, kaddibna waxaa goobtaasi ka dhacay qarax kale oo xooggan.
Intii uu socday weerarkii huteel Saxafi, ayaa waxaa telefoonka igula soo xidhiidhay mid ka mid ah dagaalyahannada Al-shabaab, waxaana uu ii sheegay in jeneraalka ay kudabajireen tan iyo bishii August 2011-ka, uuna hogaaminayay howgalkii looga saaray Muqdisho.
20-kii bishii Febraayo ee sanadkan markii la weeraray huteel Central, dadkii isku qarxiyay waxaa ka mid ahayd Luul Xuseen oo ka shaqeyn jirtay qeybta soo dhaweynta ee huteelkaasi.”